GBM lying | Zambia Daily Nation
GEOFFREY Bwalya Mwamba was never close to late president Michael Sata and is fooling himself by using the name of the late president to try and win the Bemba vote in the forthcoming general elections, Kennedy Kamba has charged.
Mr Kamba who is Patriotic Front (PF) Lusaka Province youth chairman said Mr Mwamba should not claim that he was the closest to former president Sata because he slandered and demonised the late president soon after resigning from government as Minister of Defence.
He stated that UPND presidential candidate Hakainde Hichilema should realise that Zambians were not going to vote for him because of nominating Mr Mwamba to be his running mate.
Mr Kamba said Mr Mwamba had a bad record of being a violent man who was proud for causing bodily harm to other people and would be political suicide for the UPND to take over the governance of the country.
He said the PF was aware that the UPND and its campaign team comprising Mr Mwamba, Miles Sampa and Guy Scott were using the name of Mr Sata to win the sympathy vote in Northern, Luapula and Muchinga Provinces.
Mr Kamba warned that Zambia would degenerate into a dictatorship should Mr Hichilema and Mr Mwamba take over the governance of the country and advised that the UPND should outrightly be rejected because of the suspicious character of its leadership.
“Mr Mwamba is a shameless liar to claim that he was closer to Michael Sata while in the PF and we know that he, together with Dr Scott and Mr Sampa, is using the name and legacy of the late president to win the Bemba vote. But let them know that they will never fool people from Northern, Luapula and Muchinga Provinces because they know that Mr Mwamba demonised late president Sata when he resigned from Government,” he said.
Mr Kamba warned that the PF would not tolerate the UPND to continue abusing the name of Mr Sata and would, therefore, rise to defend his legacy.
He recalled that Mr Mwamba contested the Kabwata seat in 2006 which he lost the Agriculture
ZPPA nods Dubai printer